Eto atsika mahita azy, raha fifidianana no nampandroso, efa resin'ny Gasy i Amerika
samedi, 02 mars 2019 17:31
Mety maro ny tsy hitovy hevitra amiko, fa fahadisoana politika no ataon'ny mpitondra ankehitriny miazakazaka hanao fifidianana deputé io.
Mety hiteny ianareo hoe efa lany daty ny député, ka mila vitaina malaky, na hoe izany ny demokrasia, hanamafisana ny fahalanian'ny filoha, ananany majorité na maro an'isa.
Hevi-diso daholo izany amiko, Madagasikara tsy Europe na Amerika, tsy ny demokrasia any no ampandroso antsika.
Efa nahazo alalana hanao ordonance hisolo toerana ny sénat sy ny député ny filoha, ka inona no tsy ampiasany izany? Lazaina fa dictateur ve? Ka misy lalàna mila miova, tsy mila ady hevitra sy kolikoly feno ao amin'io deputé io. Izay lany vaovao eo ve dia anjely indray ka tsy hisy malety intsony?
Betsaka ny nanakiana ahy tamin'ny zaho niteny fa tapitra hatreo ny mission nomena ny PM, betsaka ny tsy nahazo ny tiako ho lazaina.
Raha anatanteraka ny velirano IEM dia tsy PM nanao mission élection no anankinana ny fitondrana rehefa lany ianao. Safidy moa no nataony hamerina ny PM sy ny minisitry ny ati-tany. Midika izany fa tsy ny IEM no laharam-pahamehana fa hanao élection, izay efa hita io ny daty hanaovana députation.
Ho hitatsika eto, fa io fifidianana io no amakivaky ireo mpanohana ny mpitondra satria ny rehetra te ho kandida tohanan'ny mpitondra daholo, satria izy no manam-bola sy mety handresy maro. Izay tsy voatana ny candidature-ny dia hitabataba, ary ho betsaka izany.
Izao mangina daholo ny mpanao politika rehetra, ary nanana tombony be ity fitondrana ity, fa na dia maro aza ny tabataba taorian'ny fifidianana dia nanaiky azy avokoa ny mpanao politika sy ireo mpiara-miasa ara-bola na eto an-toerana na any ivelany.
Ho tonga anefa ny propagandy, dia hiakatra io maripana io, ary andeha daholo ny "taim-bava sy ny teny marary rehetra", amaly bontana amin'ny famoahana dossier sy fanagadrana ny mpitondra, izay efa manomboka moa izy izao. Tapahina daholo ny tendan'ireo mpamatsy vola izay atahorana.
Vita ny fifidianana, tsy misy surprise eo, fa 80% n'ireo lany dia hanohana ny fitondrana avokoa, na ireo independant aza.
Faly ny mpitondra satria hoe namafisin'ny vahoaka ny fahalaniany, ohatran'ny hoe tsy mbola matoky tsara fa tena lany ka mila amafisina.
Mandeha ihany ny fotoana, ny asa atao tsy ho vita fa lany andro ady politika eto hatrany.
Hatreto, dia tsy nahita mihitsy aho fanapahan-kevitra goavana, ialako tsiny. Mety hoe vao iray volana sy tapany no teo, fa hatreto dia tsapa fa tsy misy vola ny fanjakana, hanao magie inona eo koa moa, ny asa famokarana ihany no ampidi-bola. Rehefa ampanantenainao mana ny olona dia tsy hiasa izy fa iandry mana hilatsaka, dia ianao no tsy hatory hitady mana. Raha nisy ny mana tsy nisy firenena nahantra teto. Tsy misy izany fa ny asa no amelona ny firenena.
Ajanony ny ady lahy politika, antsoy daholo ny rehetra hiasa, anangana ny Firenena, mbola tsy tara izao. Tsy fiaraha-mitantana izany, tsy fitadiavan-tseza velively, fa firenena iombonana, samy manana vahaolana ny maro, atambaro izany vahaolana izany fa vetivety dia androso isika, ny voninahitra hijanona aminareo mpitondra hatrany, ary hipetraka ho tantara ny anaranareo.